Oli Tank Semi Trailer, Tank ကွန်တိန်နာ, ကတ္တရာသုံး Tank Trailer - Shengrun
ရှန်ဒေါင်း shengrun မော်တော်ယာဉ်အနိမ့်သိပ်သည်းဆ ...
ယာဉ်အမည်: အနိမ့်သိပ်သည်းဆအမှုန့်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ပိုင်းနောက်တွဲယာဉ်။ ကြေညာချက်မော်ဒယ်: SKW9404GFLA ။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: ပြင်ပရှုထောင်: အရှည်: 11700,10950 * အကျယ်: 2500 * အမြင့် 4000mm ။ Volume ကို: 55 ကုဗမီတာယေဘုယျအရည်အသွေးမြင့်: 9460 / 8600kg ။ ဝန်: 30540 / 31400kg ။ အခြေခံပညာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ pi ...
ရှန်ဒေါင်း shengrun မော်တော်ကားအမှုန့် mater ...
ယာဉ်အမည်: အမှုန့်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်တစ်ပိုင်းနောက်တွဲယာဉ်။ ကြေညာချက်မော်ဒယ်: SKW9401GFL ။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: ပြင်ပရှုထောင်: အရှည်: 13000 * အကျယ်: 2500 * အမြင့်: 3990. Volume ကို: 68 ကုဗမီတာယေဘုယျအရည်အသွေးမြင့်: 12800. Load: 27200. အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ pin ကို: 90 #, ခြေထောက်: 28 တန်ချိန် ...
Curabitur မဟုတ်တဲ့များမှာ eu est vehicula Magna အတွက်မဟုတ်တဲ့ ligula placerat condimentum
Shengrun Semi Trailer ကိုပစ်သိမ်းရန်
Shengrun စက်ရုံကတ္တရာသုံးရေနံတင်သင်္ဘော Semi Trailer
Shengrun ဟော့ရောင်းရန် 40 FT ကွန်တိန်နာဆီရေနံတင်သင်္ဘော S က ...
အမြောက်အများဘိလပ်မြေရေနံတင်သင်္ဘော , လောင်စာဆီရေနံတင်သင်္ဘော , ရေနံတင်သင်္ဘော , အမြောက်အများဘိလပ်မြေရေနံတင်သင်္ဘောနောက်တွဲယာဉ် , အမြောက်အများဘိလပ်မြေအကြံပေးအဖွဲ့ , အမြောက်အများဘိလပ်မြေအကြံပေးအဖွဲ့နောက်တွဲယာဉ် ,